Vaovao - Torohevitra marina momba ny vokatra fitsitsiana angovo sy fiarovana ny tontolo iainana
Ny efijery fahombiazan'ny singa marobe dia fitaovana fizahana olona sy manan-tsaina noforonin'ny orinasanay araka ny fangatahan'ny tsena sy ny famokarana.
Fampisehoana sy toetra mampiavaka ny efijery fahombiazan'ny singa marobe.
1. Ny feeder sy ny écran vibrant dia mitambatra ho iray. Ny feeder iray manontolo dia ao amin'ny vatan'ny famehezana amin'ny faran'ny fihinanam-bilona amin'ny efijery mihetsiketsika, ary ny loharanon'ny hozatry ny faran'ny sakafo dia eo ivelan'ny vatana famehezana. Ny fifandraisana malefaka amin'ny fingotra dia ampiasaina mba hifandraisana amin'ny fonony famehezana, izay mamonjy ny habaka avo.
2. Ny feeder mihetsiketsika dia ao anatin'ny efijery mihetsiketsika, izay mampihena ny teboka fanokafana ny fihoaran'ny vovoka. Ny vavahady vavahady dia ampidirina mivantana ao amin'ilay faritra fahanana ao amin'ny seranan-tsakafo fihoviana, izay manatsara ny fiarovana ny tontolo iainana.
3. Ny efijery vibration integral, ny vibration amin'ny écran, ny sisin'ny efijery dia tsy mandray anjara amin'ny vibration, mampihena ny kalitaon'ny vibration, mampihena ny fiantraikany amin'ny fototra. Ny efijery sy ny vibration exciter dia apetraka amin'ny faritra, mihozongozona tsy miankina, mora disassemble sy mitazona.
4. Ny exciter vibration dia apetraka ivelan'ny sisin'ny efijery, izay manala ny fahafahan'ny vovoka be dia be hiditra ao amin'ny efitrano fitondra, ary ny fiaretana dia manana androm-piainana maharitra.
5. takelaka sivana sivana sinter dia takelaka sivana roa sosona roa sosona miaraka amin'ny fahombiazan'ny fitiliana avo. Ny efijery coke dia mandray bara vy na bara vita amin'ny seramika, miaraka amin'ny fiainana maharitra maharitra maharitra.
6. Ny firafitry ny efijery haingam-pandeha 6-singa dia voaisy tombo-kase ary misy vokany tsara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
7. Fito Ny rafitra famahanana sakafo dia voaisy tombo-kase amin'ny faran'ny fahanan'ny efijery mihetsiketsika. Ny fitaovana dia mivezivezy avy eo amin'ny vavahady chute mankany amin'ny feeder, avy eo mankany amin'ny chute amin'ny faran'ny faran'ny shaker shaker sy ny fitaovana amboniny, ary ny fitaovana eo ambanin'ny efijery mankany amin'ny hopper ary chute. Ny fifandraisana mafy rehetra dia voaisy tombo-kase tsy misy fiparitahan'ny vovoka, izay afaka mampihena ny habetsaky ny rivotra amin'ny mpanangona vovoka efijery ao ambanin'ny fatana fandoroana, ary mamonjy ny fanjifana angovo amin'ny alàlan'ny angovo sy ny fitazonana ireo fitaovana fiarovana ny tontolo iainana amin'ny halavany lehibe kokoa vidiny.
8. singa marolafy haingam-pandeha avo lenta ho an'ny fikojakojana saika maharitra andavan'andro, maimaimpoana fotsiny ny takelaka efijery sy ny fihozongozona.
Ny efijery fahombiazan'ny singa marobe, ny fahombiazana tsara, ny vidin'ny asa ambany indrindra no safidinao.